Gym တွေမှာ လုပ်မိတတ်တဲ့ သူများတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမူ ၇ မျိုး – Gentleman Magazine
Gym တွေမှာ လုပ်မိတတ်တဲ့ သူများတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမူ ၇ မျိုး
ကျွန်တော်တို့အားလုံး လူကြီးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကလေးဘဝက သိရှိခဲ့ရတဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး သင်ခန်းစာလေးတွေကို မလုပ်တတ်မိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒိထဲက တစ်ခုကတော့ ကိုယ်လက် အပြုအမူတွေပါ။ နောက်တစ်ခေါက် Gym ရောက်လို့ သတိထားကြည့်လိုက်ရင် အဲဒိ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါတွေက တမင်တကာ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ မတော်တဆပါ။ ဒါမေယ့်ဒီမှာ သင့်ကို ပိုပြီးယဉ်ကျေးစေပြီး Gym ရဲ့ လူရိုင်းအဖြစ် အထင်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အချက် ၇ ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. သင့်ရဲ့ DNA ကို ချန်ခဲ့ခြင်း
သင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပီးတိုင်းမှာ သင့်ရဲ့ နေရာကို အညစ်အကြေးတွေ သုတ်တဲ့ အကျင့် လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ စက်တစ်ခုကို သုတ်တာက စပြီး ပစ္စည်းတွေ နေရာတကျ ပြန်ထားတာ အထိ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ အညစ်အကြေးတွေချွေးတွေ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ နေရာမှာ မထိုင်ချင်ပါဘူး။
၂. စက်ပစ္စည်းတွေကို အပိုင်စား ယူထားခြင်း
စက်တွေ၊ အလေးမ Plate ပြားတွေ အကြောင်း ပြောရင် လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခု လုပ်တဲ့အခါမှာ နားလည်ပေးတတ်ရပါမယ်။ Gym မှာ လူရှုပ်နေရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အကျိုး ရှိရှိပြီးအောင် လုပ်ပါ။ တခြားစက်တွေကိုလဲ တစ်ချိန်ထဲမှာ ကိုယ့်အတွက် သိမ်းမထားပါနဲ့။ တခြားသူတွေကိုလဲ လေ့ကျင့်ခန်း မြန်မြန်လုပ်ခွင့် ပေးထားပါ။
၃. နေရာ မယူပါနဲ့
Gym တော်တော်များများမှာ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် စက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လွတ်နေတဲ့ စက်တစ်လုံးပေါ် တက်လိုက်ဖို့ လွယ်ပေမယ့် ဘေးကိုကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတဲ့သူ နည်းရင် လူ ဖြန့်ပြီး လုပ်ပါ။ စက်အများကြီးလွတ်နေတဲ့ထဲကမှ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘေးက စက်ကို ယူတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၄. အလေးမ ခုံတန်းပေါ်မှာ ဖုန်းပြောခြင်း
Gym မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခဏ စကားပြောတာ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်က Gym က စက်တွေပေါ်မှာ Social Site တွေ သုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တခြားသူတွေ တန်းစီပြီး စောင့်နေတဲ့ စက်ပေါ်မှာ သင်က ဖုန်းပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ မှားနေပါပြီ။
၅. Selfie ရိုက်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း ရပ်ခြင်း
စမတ်ဖုန်းတွေ ကြီးစိုးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ Check In မဝင်လိုက်ရရင် Gym လာရာ မရောက်တော့ပါဘူး။ ရိုက်စရာရှိတာကို ရောက်ကတည်းက ရိုက်ထားပါ။ Angle အမှန်ရဖို့ မှန်တစ်ချပ်ရှေ့မှာ ပုံစံမျိုးစုံ လုပ်ပြနေရင်တော့ နည်းနည်း လွန်နေပါပြီ။
၆. ခေါ်တောကြည့် ကြည့်ခြင်း
သူများတွေကို လက်ညှိုးထိုးတာ ရိုင်းသလိုပဲ အကြည့်စူးစူးနဲ့ ကြည့်တာကလဲ ရိုင်းတာပါပဲ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသူတစ်ယောက်ကို ကြည့်တာ ပုံမှန်ပါ။ သူ့လို ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ သူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကို လေ့လာတာလဲ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုပဲ တစ်ချိန်လုံး အကြည့်စူးစူးကြီး ကြည့်နေတာကတော့ အရမ်းရိုင်းပါတယ်။ လူတော်တော်များများက အကြည့်ခံရတာ မကြိုက်ဖူးဆိုတာလဲ မှတ်ထားပါ။
၇. သီချင်း အကျယ်ကြီး ဖွင့်ခြင်း
Snare ရဲ့ Beat တွေကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ရတာ သင်နှစ်သက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် Gym မှာရှိသမျှလူတိုင်းက သင့်လို Snare မကြိုက်ဖူးဆိုတာ သတိပြုပါ။ လူတိုင်းဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် နားထောင်တဲ့ Music အကြိုက်ပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှိကြတာပါ။ အဲဒါကြောင့် နောက်တစ်ခေါက်ကျရင် နားကြပ်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အသံတိုးတိုးသာ နားထောင်ပါတော့။
Gym သှားကစားမယျဆိုရငျ ဒီလိုအပွုမူမြိုးတှေ ရှောငျပါ
ကြှနျတျောတို့အားလုံး လူကွီးတှပေါ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတဈလမှော ကလေးဘဝက သိရှိခဲ့ရတဲ့ အရိုးရှငျးဆုံး သငျခနျးစာလေးတှကေို မလုပျတတျမိခဲ့ကွပါဘူး။ အဲဒိထဲက တဈခုကတော့ ကိုယျလကျ အပွုအမူတှပေါ။ နောကျတဈခေါကျ Gym ရောကျလို့ သတိထကွညျ့လိုကျရငျ အဲဒိ ရိုငျးစိုငျးတဲ့ အပွုအမူတှကေို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
အဲဒါတှကေ တမငျတကာ ရညျရှယျပွီးလုပျတာ မဟုတျပါဘူး၊ မတျောတဆပါ။ ဒါမယျေ့ဒီမှာ သငျ့ကို ပိုပွီးယဉျကြေးစပွေီး Gym ရဲ့ လူရိုငျးအဖွဈ အထငျခံရခွငျးမှ ကာကှယျနိုငျတဲ့ အခကျြ ၇ ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. သငျ့ရဲ့ DNA ကို ခနျြခဲ့ခွငျး
သငျ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပီးတိုငျးမှာ သငျ့ရဲ့ နရောကို အညဈအကွေးတှေ သုတျတဲ့ အကငျြ့ လုပျထားသငျ့ပါတယျ။ စကျတဈခုကို သုတျတာက စပွီး ပစ်စညျးတှေ နရောတကြ ပွနျထားတာ အထိ လုပျသငျ့ပါတယျ။ ဘယျသူမှ တခွားသူတဈယောကျရဲ့ အညဈအကွေးတွေခြှေးတှေ ဖုံးအုပျနတေဲ့ နရောမှာ မထိုငျခငျြပါဘူး။
၂. စကျပစ်စညျးတှကေို အပိုငျစား ယူထားခွငျး
စကျတှေ၊ အလေးမ Plate ပွားတှေ အကွောငျး ပွောရငျ လကေ့ငျြ့ခနျး တဈခု လုပျတဲ့အခါမှာ နားလညျပေးတတျရပါမယျ။ Gym မှာ လူရှုပျနရေငျ မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ အကြိုး ရှိရှိပွီးအောငျ လုပျပါ။ တခွားစကျတှကေိုလဲ တဈခြိနျထဲမှာ ကိုယျ့အတှကျ သိမျးမထားပါနဲ့။ တခွားသူတှကေိုလဲ လကေ့ငျြ့ခနျး မွနျမွနျလုပျခှငျ့ ပေးထားပါ။
၃. နရော မယူပါနဲ့
Gym တျောတျောမြားမြားမှာ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးအတှကျ စကျတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ လှတျနတေဲ့ စကျတဈလုံးပျေါ တကျလိုကျဖို့ လှယျပမေယျ့ ဘေးကိုကွညျ့ပါ။ တကယျလို့ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျနတေဲ့သူ နညျးရငျ လူ ဖွနျ့ပွီး လုပျပါ။ စကျအမြားကွီးလှတျနတေဲ့ထဲကမှ တဈခွားသူတဈယောကျရဲ့ ရှတေ့ညျ့တညျ့၊ ဒါမှမဟုတျ ဘေးက စကျကို ယူတာ မဖွဈသငျ့ပါဘူး။
၄. အလေးမ ခုံတနျးပျေါမှာ ဖုနျးပွောခွငျး
Gym မှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ခဏ စကားပွောတာ ကိစ်စ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျက Gym က စကျတှပေျေါမှာ Social Site တှေ သုံးဖွဈနမေယျဆိုရငျမဟုတျတော့ပါဘူး။ တခွားသူတှေ တနျးစီပွီး စောငျ့နတေဲ့ စကျပျေါမှာ သငျက ဖုနျးပွောနမေယျဆိုရငျတော့ မှားနပေါပွီ။
၅. Selfie ရိုကျဖို့ လကေ့ငျြ့ခနျး ရပျခွငျး
စမတျဖုနျးတှေ ကွီးစိုးနတေဲ့ ခတျေကွီးမှာ Check In မဝငျလိုကျရရငျ Gym လာရာ မရောကျတော့ပါဘူး။ ရိုကျစရာရှိတာကို ရောကျကတညျးက ရိုကျထားပါ။ Angle အမှနျရဖို့ မှနျတဈခပျြရှမှေ့ာ ပုံစံမြိုးစုံ လုပျပွနရေငျတော့ နညျးနညျး လှနျနပေါပွီ။
၆. ချေါတောကွညျ့ ကွညျ့ခွငျး
သူမြားတှကေို လကျညှိုးထိုးတာ ရိုငျးသလိုပဲ အကွညျ့စူးစူးနဲ့ ကွညျ့တာကလဲ ရိုငျးတာပါပဲ။ ဆှဲဆောငျမှုရှိသူတဈယောကျကို ကွညျ့တာ ပုံမှနျပါ။ သူ့လို ဖွဈအောငျ လုပျဖို့ သူလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာကို လလေ့ာတာလဲ မမှားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကိုပဲ တဈခြိနျလုံး အကွညျ့စူးစူးကွီး ကွညျ့နတောကတော့ အရမျးရိုငျးပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက အကွညျ့ခံရတာ မကွိုကျဖူးဆိုတာလဲ မှတျထားပါ။
၇. သီခငျြး အကယျြကွီး ဖှငျ့ခွငျး
Snare ရဲ့ Beat တှကေို ကယျြကယျြဖှငျ့ရတာ သငျနှဈသကျမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ Gym မှာရှိသမြှလူတိုငျးက သငျ့လို Snare မကွိုကျဖူးဆိုတာ သတိပွုပါ။ လူတိုငျးဟာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျ နားထောငျတဲ့ Music အကွိုကျပုံစံ အမြိုးမြိုး ရှိကွတာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ နောကျတဈခေါကျကရြငျ နားကွပျနဲ့ တတျနိုငျသမြှ အသံတိုးတိုးသာ နားထောငျပါတော့။
Previous: ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို
Next: အောင်မြင်ကျော်ကြားလိုသူတို့အတွက် အဆိုအမိန့် ၅၀